ဂျာမန်စာက ခက်တယ်ဆို။ မရှင်လေးကို ချီးကျူးတယ်။ ကျောင်းပြန်တက်နိုင်လို့။ ကျွန်မမှာ ကိုယ်နဲ့မဝေးခဲ့တဲ့ Englishလိုတောင် မနည်းကြိုးစားနေရတာ။ မိန်းကလေးတွေရော engineeringဘက်ကို သွားတာများလား။ ဒီမှာ နည်းသလိုပဲ။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နည်းတာကို
ပြောတာပါ။ တခြားပြည်နယ်တွေမှာတော့ မသိဘူး။ ဝေမျှပေးတာကျေးဇူးပဲအစ်မ။ ကျောင်းအကြောင်းဆို စိတ်ဝင်စားလို့ပါ။
If 40 above, easy to find mini job?
ွှThanks for your sharing sis!
19 December 2009 at 07:07
Thuhninsee ညီမရေ ဒီမဗာ အမျိုးသမီးတွေက နေရာတော်တော်များများမှာ ရှိကြတယ်။ တချို့ 
မထင်မှတ်တဲ့နေရာတွေမှာလည်း ( ယောကျာင်္းလေး အလုပ်တွေ)ရှိတယ်။ engineering ဘက်ကို
သွားကြပေမဲ့ ယောကျာင်္း ဦးရေလောက်တော့မများဘူး။
တချို့ အလုပ် ( doctor's Assistant) ဆိုရင်
ယောကျာင်္း တယောက်မှ မရှိသလောက်ပဲ။
လုပ်ငန်းခွင်မှာ ကြီးစိုးနေတာကတော့ယောကျာင်္းတွေ ပါပဲ။
San :Mini Job တွေကို ဘယ်အရွယ်ဖြစ်ဖြစ်
တခြားအလုပ်တွေထက်စာရင် ရှာလို့ လွယ်ပါတယ်။
အခြေခံ သာမန်အလုပ်တွေများပါတယ်။ တချို့ပင်စင်ယူပြီ။ ၆၄ နှစ်နဲ့Mini Job လုပ်နေသူတွေရှိပါတယ်။
ှSubuueain နဲ့လာလည်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများ
သိချင်နေတဲ့ အကြောင်းလေးတွေ ဖတ်လိုက်ရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်မရှင်လေးရေ...
ဂျာမနီမှာ ကျောင်းလာတက်တဲ့ မြန်မာ ကျောင်းသား
တွေရော ဘယ်လို အလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိလဲ သိချင်ပါတယ်..အမရေ.. တပတ်ကို ဘယ်နာရီ လုပ်လို့ ရလဲ။ ကျောင်းသား တယောက်အနေနဲ့ တနာရီ ကို ဘယ်လောက် အနည်းဆုံး ရလဲ။ ဘယ်လို အလုပ်မျိုးတွေ လုပ်လို့ရလဲ။ အလုပ်အကြောင်းပြည့် ပြည့်စုံစုံ ဖတ်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။